Ngaba ufuna ababhalisi be-YouTube BASIMAHLA kunye nokuthandwa simahla kwe-YouTube?
Ngaba ufuna ababhalisile ngakumbi kwaye uthanda ukuzibandakanya kwiividiyo zakho zeYouTube? Ngenisa i-URL yejelo lakho le-YouTube ukungena ngemvume kwaye uqalise!
Fumana ababhalisi beYouTube simahla ngoku! or Thenga abathengi be-YouTube
Fumana ababhalisile beYouTube simahla, okanye uzame ababhalisi beprimiyamu, iimbono kunye nezinto ozithandayo ngokukhula ngokukhawuleza!
Ukungena kunye nokuNgena
Ukungena kunye nokungena ngemvume kuthatha imizuzwana engama-30!
Sebenzisa isicwangciso sethu sasimahla esidumileyo nesisebenzayo, okanye uzame isicwangciso esihlawulelweyo.
Bukela iSiteshi sakho sikhula
Bukela ababhalisele ijelo lakho kunye nevidiyo eyonyukayo!
Izicwangciso zasimahla nezihlawulelweyo
Izicwangciso ezilungelelanisiweyo kunye namaxabiso ahambelana neemfuno zakho
Ababhalisi baLondolozo oluphantsi
Indlela eya kwiPro
Ababhalisi baGcino oluPhezulu
Iindlela ezili-15 zokufumana ababhalisele ngaphezulu kwaYouTube kwiShishini lakho
Ngaba uyazi ukuba kukho malunga ne-1.86 yezigidigidi zabasebenzisi be-YouTube kwihlabathi liphela ngo-2021? I-18% yabantu basebenzisa iYouTube ngokukodwa ukulandela iinkampani kunye neempawu.
Ezi nkcukacha-manani zikwenza kucace gca ukuba ukuba njengomnini weshishini awusebenzisi amandla e-YouTube, uphulukana neLOTI! Umxholo wevidiyo lixesha elizayo. Ngempazamo iyanceda ukwandisa ukufikelela kwakho kunye nokwakha ulwazi malunga negama. Kodwa ngokhuphiswano olunje ngomqala, uphume njani kulwandle olukhulu lomxholo wevidiyo ofikeleleka ngokulula?
Kule bhlog, siqokelele iingcebiso eziluncedo ezili-15 kunye namacebo okuqokelela ababhalisile be-YouTube simahla ukuba bathathe ishishini lakho baye kwinqanaba elilandelayo. Masingene ngqo!
1. Cela abaphulaphuli bakho ukuba babhalise
Njengoko oku kungavakala ngathi, ukukhuthaza abaphulaphuli bakho ukuba babhalise kwisitishi sakho ngamanye amaxesha kunokuba yiyo yonke into ukuze ufumane ababhalisile beYouTube simahla. Iyafana nendlela oyifaka ngayo i-CTAs (Biza ukuba uthathe isenzo) ukuya esiphelweni sebhlog yakho, amaphepha okufika okanye ezinye izithuba zemidiya yoluntu.
Umzekelo, ungaqala ividiyo yakho ngokucela ababukeli bakho ukuba babhalise kwisitishi sakho ukuba banqwenela ukubona umxholo ongaphezulu kuwe rhoqo.
Ukuba ucinga ukuqala ividiyo ngokubuza umrhumo kukwenza ukuba ufumane ukuthengisa-y, ungakwenza oko ekupheleni kwevidiyo. Ungalibali ukubonisa ukuba kutheni ijelo lakho kufanelekile ukuba ubhalise kulo kunye nomxholo owuzisayo kwitafile ukuze izibonelelo zababukeli bakho. Nyaniseka kwaye ubabonise ukuba ukuzibandakanya kwabo kuthetha ntoni kuwe kunye nendlela ekunceda ngayo ukuba wenze owona mxholo ungcono njengomdali.
2. Yenza umxholo onyanzelisayo
Oku kunokubonakala ngathi akukho-brainer kodwa kusafuneka kukhankanyiwe. Baninzi kakhulu abanomdla wokuyila i-YouTube abavakalelwa kukuba banokuba yimvakalelo enkulu elandelayo ye-YouTube ngokuthumela umxholo ophakathi. I-flash flash: ngekhe! I-intanethi izaliswe ziividiyo kunye nomxholo wazo zonke iintlobo. Ngeendlela ezininzi onokukhetha kuzo, kuya kufuneka ubenakho ukubonelela ngento eyahlukileyo kubaphulaphuli bakho ukuze babukele ijelo lakho kwaye babhalise kulo. Ukuba akunjalo, bahlala benokhetho lokuya kwelinye ijelo elilandelayo.
Khumbula ukwenza umhlaba owandisiweyo ngaphambi kokucinga ngokwenza ividiyo yakho elandelayo. Endaweni yokwenza kwakhona oko kwenziwa ngumntu wonke okwishishini lakho, cinga ngaphandle kwebhokisi uze nezimvo zakho ezizodwa. Nika ingqalelo ekhethekileyo kwimizuzwana yokuqala eli-10 yevidiyo yakho njengoko benokutsala ababukeli bakho okanye bayicime.
Zibuze. Liliphi ijelo onokuthi ukhethe ukubhalisa kulo? Umntu othumela kube kanye ngenyanga ukuya kwi-AWOL? Okanye, elinye ijelo elithumela kabini ngeveki ngokungaguquguqukiyo? Sonke siyayazi impendulo-sikhetha lowo uhlaziya rhoqo ijelo labo kunye nomxholo omtsha kubabukeli babo. Njengomdali, abaphulaphuli bakho balindele ukuba ubhale ngexesha ukugcina bezibandakanya kwaye batsale ababukeli abatsha ngokunjalo. Okukhona ababhalisi beYouTube besimahla, kokukhona ukuthanda kukaYouTube kusimahla. Ukuphumelela!
Ukuba neshedyuli yokuthumela umxholo wakho kukugcina uhleli kwaye uvelisa iziphumo. Akunyanzelekanga ukuba uhlale phambi kwekhompyuter ukuze uphile kwaye uyithumele. Unokusebenzisa izixhobo zokulawulwa kwemithombo yeendaba ekuvumela ukuba ucwangcise iividiyo zakho ezinokupapashwa kamva.
4. Nqamleza isiteshi sakho seYouTube kwelinye iqonga
Ukuba sele unayo iwebhusayithi, indlela elungileyo yokufumana ababhalisi beYouTube simahla kukusebenzisa ukugcwala okungaguqukiyo kwiwebhusayithi yakho. Nyusa ijelo lakho leYouTube kwiwebhusayithi yakho. Ukuba usebenzisa iiplagi ezifanelekileyo, abaphulaphuli bakho banokucofa nje kwiqhosha kwaye bathunyelwe kwiphepha lakho le-YouTube ukujonga umxholo wakho. Unokuthathela ingqalelo ukungenisa amakhonkco akho eYouTube kwizithuba zakho zebhlog ukuze utsale abafundi bakho ukuba bandwendwele iphepha.
Elinye iqhinga elihle kukukhuthaza isitishi sakho se-YouTube kwamanye amaqonga eendaba ezentlalo anje nge-Twitter, i-Facebook, i-Instagram kunye ne-LinkedIn. Nanini na xa unevidiyo entsha ezayo, ungabelana ngetreyila okanye iziqwengana zayo kwibali lakho le-Instagram ukwakha ulindelo. Ukuba uqokelele inani elifanelekileyo lomlandeli kula maqonga, kwaye bayayithanda into oyenzayo, iya kuba ngumcimbi wexesha kuphela ngaphambi kokuba babe ngababhalisi bexesha elide.
5. Yongeza i-Watermark kwiividiyo zakho
Abenzi bemxholo kwiYouTube banokongeza i-watermark encinci kuzo zonke iividiyo abazenzileyo. Rhoqo abadali bemixholo abaqalayo abazi nokuba ukhetho lwewatch lukhona eqongeni. Yimpawu encinci ehamba phezu kwekona elisezantsi lasekunene levidiyo zakho. Ungayenza ngokwezifiso i-watermark yakho yohlobo okanye usebenzise i-watermark efana neqhosha lokubhalisa lika-YouTube.
Ngelishwa, amaxesha amaninzi i-brand watermark inokungabonakali okanye ingabangeli ababukeli ukuba bathathe nantoni na. Sikucebisa ukuba unamathele kwiqhosha elibomvu lokubhalisa elisetyenziswa nguYouTube ngokwesiqhelo. Oku kwenza ukuba ababukeli babone lula, kwaye kunokwenzeka ukuba bacofe kuyo. Nangona kunjalo, ukuba usafuna ukwenza ngokwezifiso, unokucofa ngokwezifiso kwimenyu emva koko ukhethe uphawu lokushicilela.
6. Nika umboniso wento ezayo
Eyona ndlela ifanelekileyo yokufumana ababhalisi beYouTube simahla kukwenza ababukeli bakho bonwabe kwaye babe likhoboka lomxholo owenzayo. Kungenxa yokuba, nje ukuba bakuthande oko bakubonayo, umsebenzi wakho uya kukwenza konke ukuthetha, kwaye baya kunamathela kokunye. Ubuchule obucokisekileyo bokuyila abadali beYouTube basebenzise ukugcina abaphulaphuli babo bezibandakanya ngokwakha ulindelo lwevidiyo yabo elandelayo.
Ividiyo entsha yomculo, ukwenziwa kwemveliso entsha, inqaku elitsha kwimveliso yakho, inkonzo entsha, okanye nentsebenziswano engalindelekanga kunye neenkwenkwezi ezidumileyo! Nokuba yeyiphi, khumbula ukurhwebesha abaphulaphuli bakho ngokubanika noluvo lokuba ividiyo yakho elandelayo iza kuba malunga nantoni. Ukuba uwenza ngokwaneleyo umsebenzi wakho, unokuqiniseka ukuba ababukeli bakho abathembekileyo baya kubakho ukubukela ividiyo elandelayo ngomphefumlo ophefumlelweyo kwaye bakunike ukuthandwa simahla kwiYouTube.
7. Yenza uluhlu lokudlalayo ukuze ugcine ababukeli bakho bethe nca
Ngaba unayo iseti yeevidiyo ezinokucwangciswa ngcono ngoluhlu lwadlalwayo? Mhlawumbi ubonelela ngezifundo zobalo kwaye ugubungela isihloko esinye kwividiyo enye. Okanye, unazo iiseti zewebhu? Nokuba yeyiphi na, uluhlu lokudlala lukuvumela ukuba ubeke olona nyawo lwakho phambili ngokubonisa ababukeli bakho ukuba kukho ukuqhubeka komxholo wakho. Ngokwenza uluhlu lokudlala, ubakhokela kuhambo lwexesha elide kunye nesibheno kumnqweno wombukeli wokuzinkcinkca ngotywala.
Esinye isibonelelo soluhlu lokudlalwayo kukuba bandise ixesha lokubukela lesitishi sakho. Iividiyo ziyaqhubeka nokudlala kwimowudi 'yokudlala ngokuzenzekelayo' ngokulandelelana kwangaphambili. Oku kuyafana nendlela isizukulwane seminyaka eliwaka esihlala sinomdla wokungena ngayo kuthotho lweNetflix. Ngoluhlu lokudlalwayo lwe-YouTube, uya kuba nakho ukufezekisa umnqweno ofanayo kunye nesiphumo, unike ishaneli sakho izizathu ezininzi zokufumana ukuthanda kwakho simahla kwi-YouTube.
Sebenzisa amakhadi kunye nezikrini zokuphela ukukhuthaza ezinye iiVidiyo
Izikrini zokuphela kunye namakhadi zizixhobo ezinamandla ezenza ukuba umnxeba wakho uthathe inyathelo elinempembelelo ngakumbi. Njengoko igama libonisa, isiphelo sesikrini ngumfanekiso oza ekupheleni kwevidiyo yakho enokusetyenziselwa ukucela ababukeli bakho ukuba babhalise. Okanye, ungayisebenzisa ukukhuthaza iwebhusayithi yakho okanye ukhombe abaphulaphuli bakho kwividiyo elandelayo. Ukuba uyafuna, ungabuyela umva kwaye ungeze izikrini zokugqibela kwiividiyo ezindala esele zithunyelwe kwisitishi sakho. Le yeyona ndlela ilungileyo yokufumana ababhalisi beYouTube simahla kunye nokunyusa ukuthandwa simahla kweYouTube.
Ukongeza isikrini esiphelayo, yiya nje kwimenyu yasekhohlo yeSitudiyo Sabadali kwaye ucofe umxholo. Khetha ividiyo ofuna ukuyongeza kwiscreen sokugqibela. Cofa ibhokisi yesiphelo esivela kwicala lasekunene lesikrini. Unokukhetha kwizinto ezine ezahlukeneyo zokubhalisa ngokusekwe kwiinjongo zakho.
9. Musa ukulibala ukunxibelelana nababukeli bakho
Ukufumana simahla ukuthandwa nguYouTube kufuna umgudu ongaguqukiyo kwinxalenye yakho. Akululanga ukuphumelela ababukeli abatsha banikwa ukhuphiswano esilubona namhlanje. Indlela efanelekileyo yokusebenza malunga noku kukunika ababukeli bakho abakhoyo ngokulinganayo. Bavumele ukuba bazive bexabisekile kwaye bexatyiswa ngokukunceda ukuba ube ngumdali onguye. Zibandakanye nabo kwizithuba zakho. Phendula izimvo zabo. Yazi into abayithandayo okanye abangayithandiyo ngevidiyo yakho.
Xa usenza ubudlelwane obunentsingiselo kunye nabaphulaphuli bakho, kuguqulela kukunyaniseka kwexesha elide. Xa usiva iingcebiso zabo kwaye uzenza, baziva beviwe kwaye banxulumene nomxholo wakho ngakumbi. Khumbula, ababukeli abonwabileyo banokuzisa ababukeli abaninzi ngokwazisa ngomlomo nangokwabelana ngomxholo wakho nesangqa sabahlobo babo.
10. Qwalasela iiTreyila zeTshaneli kwi-Woo ababukeli bakho
Ngaba ufuna ukwazisa ababukeli bakho abatsha ukuba ijelo lakho le-YouTube lithetha ntoni ngendlela elula nekhawulezayo? Ngena - iiTreyila zeTshaneli. Oku kufana neenqwelwana zemuvi ezinikezela i-sneak-peak kule nto uyenzayo kunye nomxholo owenzela ababukeli bakho. Ungasebenzisa iinqwelwana zetreyila ukuqaqambisa izibonelelo zesitishi sakho. Khumbula ukugcina ubude phakathi kwemizuzwana engama-25 ukuya kwengama-30.
Isikhoji sinokuhambisa ibali lebrendi yakho, amabhongo akho kunye nento oceba ukuyiphumeza ngejelo. Ngaba kufuneka ikhuthaze, ihlekise okanye ihlasele ngokweemvakalelo? Nokuba yeyiphi na esebenzayo kuwe kwaye uyavumelana nomsebenzi wakho. Yenze ibe nefuthe ukuze ababukeli baguqulwe babe ngababhalisi ngokulula.
11. Yenza iIzithonjana zesiko eziTsala amehlo
I-thumbnail ngumfanekiso wokujonga kwangaphambili osebenza njengesigqubuthelo sevidiyo yakho. Yinto yokuqala ukuba umbukeli ajonge kuyo xa besiza kwiphepha lakho. Sonke siyazi, ukubonakala kokuqala kukuphuma kokugqibela. Ke, faka yonke imizamo yakho yokwenza isithonjana sokubamba ngamehlo esingaphaya kokuzibandakanya. Rhoqo, i-thumbnail yevidiyo yakho iba sisigqibo sokuba ngaba umbukeli ukhetha ukudlala ividiyo yakho okanye enye kwisiphumo sokukhangela.
I-YouTube ikwakha i-thumbnail emiselweyo yeevidiyo ngokumane uthwebula umfanekiso ongakhethiyo kuyo. Kwiimeko ezininzi, oku akulunganga ngokwaneleyo ukuqhuba ukugcwala kwividiyo yakho kwaye unyanzele umbukeli ukuba acofe. Sicebisa ukuba wenze i-thumbnail yakho. Mayibe ngu-1280 x 720px njengoko izikhokelo ze-YouTube zicebisa.
Icebiso lePro: Ubuso obuncumileyo obujonge ngqo kwikhamera kubonakala busebenza phantse lonke ixesha kuhlobo ngalunye lwevidiyo.
12.Khuthaza ababukeli ukuba babhalise kwisitishi sakho
Thina bantu sithanda izinto zasimahla. 'Yintoni enje ngam?' Esi iba sisizathu ngamanye amaxesha sokuba sinokwenza okanye singenzi nto. Kuyamangalisa ukuba oku kusebenza njengekhubalo lokunyusa umbono wakho we-YouTube. Ngaba ufuna ukwandisa ukuthanda kwakho simahla kwi-YouTube okanye ube nabantu abaninzi abaphawule ngeposi lakho? Indlela ekrelekrele kukuqhuba ukhuphiswano. Xelela ababukeli bakho ukuba babhalise kwisitishi sakho kwaye bagqabaze ngeposi yakho, bafumana imveliso yasimahla. Okanye, ikopi esayiniweyo yencwadi yakho, okanye isilingo sasimahla sesoftware yakho. Fumana ukubhola?
Xa usazisa ngemivuzo yokuzibandakanya nesitishi sakho seYouTube ungabona ukonyuka kwethutyana kwinani lababhalisi kunye nokuzibandakanya ngokubanzi. Nje ukuba unike ingqalelo yabo, bangenise ngomxholo ongaguqukiyo, ukuze babe ngababukeli bakho ebomini.
13. Sebenzisana nabanye abaDali ukonyusa ukuthandwa simahla kweYouTube
Kukho izinto ezinokubakho kwiYouTube ezikwishishini elifanayo njengawe. Kwakhona kunokwenzeka ukuba unokuba nabaphulaphuli abafanayo. Kutheni le nto ungaphakamisi ababukeli ngokujoyina izandla kwaye uxhamle omnye komnye? Umzekelo, unokucela ingcali kwicandelo lakho ukuba yenze udliwanondlebe nawe kwisitishi sakho. Oku kuya kunceda ukuzisa abalandeli babo kwisitishi sakho kunye nokukhulisa isiseko sakho sababhalisi. Kwangelo xesha, ababukeli bakho abebengazi ngengcali banokubhalisa kwisitishi sabo kwakhona ukuba umxholo ubuyela kubo.
Ukusebenzisana nabashukumisayo ukuze ubambe ii-eyeballs ezingaphezulu kwisitishi sakho yeyona nto indala kwincwadi yentengiso kwaye ukhe ungaphumeleli ukusebenza ngomlingo wayo. Xa abaphulaphuli bakho bebona ukusebenzisana okunjalo, kunokubangela ngakumbi iingcebiso okanye izimvo ezingqondweni zabo. Banokuphawula kwizithuba zakho kwaye bakuxelele ukuba ngawaphi amanye amagcisa angathanda ukukubona usebenzisana nawo.
14. I-Master ye-YouTube SEO
Ukulungiswa kweinjini yokukhangela kuqinisekisa ukuba abantu banokujonga umxholo wakho xa bewukhangela besebenzisa amagama athile aphambili. Umzekelo, unejelo lokupheka kwiYouTube. Uyila ividiyo kwiisendwitshi ezigreyithiweyo. Abantu baya kuyifumana njani le vidiyo ukuba awusebenzisi isihloko sakho, inkcazo kunye nokusebenzisa ii-hashtag ezifanelekileyo? Izixhobo ze-SEO ezinje ngoMcwangcisi kaGoogle zikuvumela ukuba wazi awona magama aphezulu asetyenziswa ngabantu ukufumana ulwazi oluthile.
I-YouTube SEO iqinisekisa ukuba awenzi vidiyo ngesihloko ekungekho mntu usikhangelayo. Okanye izihloko ekungekho mntu unokufumana. Ukuba awuqinisekanga ngendlela yokufumana amagama aphambili usebenzisa izixhobo ezikwi-Intanethi, funda ijelo lomntu okhuphisana naye kwaye uqaphele ukuba ngawaphi amagama aphambili abonakala esebenza. Unokusebenzisa iYouTube Analytics ukubona ukuba ngawaphi amagama aphambili akunika ezona ziphumo zibalaseleyo.
15. Zama iYouTube Live
Iividiyo ezibukhoma ziye zaba ngumkhwa olapha wokuhlala. Inani elinyukayo leapps ezinje nge-Instagram kunye ne-Facebook zilifumana eli nqaku elenza kube lula ukuba iimveliso zingene ebhodini. Ukusuka kwiiseshoni ezinomdla ze-Q & A kunye nee-webinars ukuze uphile ngokufundisa kunye nemiboniso yemveliso, zininzi izinto onokuzihlola kwi-YouTube bukhoma ukuze ufumane ababhalisi be-YouTube basimahla.
Amanqanaba okuzibandakanya kunye nokwazisa ngebrand ukuba unokwakha kwiseshoni ephilayo kuhlala kungenakuthelekiswa nanto. Nokuba luhlobo oluhlaza kunye nolwemvelo lwevidiyo ebukhoma okanye ukungaqiniseki kunye nemincili yento eza kwenzeka, ukusasaza bukhoma kufanelekile ukuzama. Ngaphambi kokuba uphile, khumbula ukutyala imali kwizixhobo ezifanelekileyo kunye nokukhanyisa ukuze ividiyo yakho ibonakale ilunge ngakumbi.
Siyathemba ukuba ezi ngcebiso zingasentla zinokufika ziluncedo ukukhulisa uphawu lwakho kwisitishi sakho kwaye ufumane ababhalisi beYouTube simahla. Khumbula, akukho bukhulu-bunye-yonke indlela yokuthengisa ividiyo. Yinkqubo yokufunda-apho uya khona ngokuthe ngcembe ufunde ukuba yeyiphi esebenzayo kuwe nengasebenziyo. Nenjongo yokwenza umxholo onomdla kwaye uwuthumele ngokungaguquguqukiyo ukwakha isiseko sababhalisi abathembekileyo. Iividiyo zomtya zeseti enye kuluhlu lokudlala ukuqhuba ngokuqhubeka. Nika ingqalelo ekusebenziseni isihloko sakho sevidiyo, inkcazo kunye nokusebenzisa ii-hashtag ezinokutsala abantu abaninzi kumxholo wevidiyo yakho.
Ukuba ukuthengisa kwe-YouTube kubonakala kunzima kakhulu kuwe kwaye ufuna uncedo lobuchwephesha, thina, kwiYTpals, sikwinkonzo yakho. Sinezixhobo kunye nobuchule bokufumana simahla ukuthandwa yi-YouTube ngokukhulisa ababhalisile bakho usebenzisa ezona zisombululo zibalaseleyo ze-SEO kunye neendlela eziqinisekisiweyo zeshishini.
Nxibelelana nathi ngazo zonke iimfuno zakho zokuthengisa ku-YouTube. Iqela lethu elinobungcali leengcali liya konwaba xa lifunda malunga neemfuno zeshishini lakho kwaye linike isisombululo esenziwe ngokufanelekileyo ezifanelekileyo kwiimfuno zakho.
6I ngoJuni 2022
Abadali bomxholo kaYouTube bakhuphisana nezigidi zabanye abadali ukubamba ingqalelo yababukeli. Ukufumana izabelo zasimahla zikaYouTube kunye nezimvo zasimahla zikaYouTube kunokuba nzima....
25th Meyi 2022
Abaqulunqi bomxholo weYouTube basebenza kwisicwangciso sabo se-SEO ukuze badibanise abo bakhuphisana nabo kunye nokuphucula umgangatho wabo weYouTube. Ngelixa ulinganisa iividiyo, i-algorithm yeYouTube ikwathatha umjongi...
16th Meyi 2022
Ngokusebenzisa amandla othethathethwano kunye namandla okuguqula umxholo wevidiyo, unokuvula amandla amakhulu okuthengisa uphawu kuYouTube. Iyinjini yokukhangela yesibini ngobukhulu, uGoogle ophethwe...
Inkonzo yokuQala yokuQala!
Ndithengile iZimvo zikaYouTube, ukuthandwa kunye nababhalisele isitishi sam kwaye bahambisa yonke into kunye neebhonasi mahala! Ndiza kusebenzisa i-YTPals ngaphezulu nangaphezulu!
Enkosi kakhulu kwii-YTPals
Ndiyabulela kakhulu i-YTPals, ndinqwenela ukukunika iinkwenkwezi ezili-10. Ndinithanda nonke, kunye nomsebenzi omnandi owenzayo.
I-YTPals, enkosi kakhulu ngoncedo lwakho, wenze ishaneli yam ukuba ikhule iphindwe kathathu njengoko yayinjalo ukuqala kwam ukusebenza kwakho simahla. Ndihambile ukusuka nje phantsi kwe-100 Subs ndaya ngaphezulu kwama-300 kwiiveki ezimbalwa ezizayo!